लेसोथोका पूर्वप्रधानमन्त्रीकी प्रथम पत्नि पतिको पूर्वपत्नीको ह''त्या आ'रो'पमा प'क्राउ ? - Filmy News Portal Of Nepal
लेसोथोका पूर्वप्रधानमन्त्रीकी प्रथम पत्नि पतिको पूर्वपत्नीको ह”त्या आ’रो’पमा प’क्राउ ?
आफ्नो पतिकी पूर्व पत्नीको ह’त्या आ’रोपमा लेसोथोकी पूर्वप्रथम महिला मसेहा थाबानेलाई प्रहरीले बुधबार पुनः प”क्राउ गरेको छ । थाबाने अब आगामी जुन १६ सम्म हि’रास’तमा रहने छिन् । गत फेब्रुअरीमा पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित हुँदा आवश्यक प्रक्रिया न’अपनाएको भन्दै उनको ज’मानत र’द्द गरिएको प्रहरी कमिस्नर होलोमो मोलिबेलीले बताए ।
मोलिबेलीका अनुसार प्राविधिक कारणले थाबानेलाई पुनः प’क्राउ गर्नुपरेको बताए । यस आरोपबारे थाबाने र उनका पति पूर्व प्रधानमन्त्री थोमास थाबानेले हालसम्म सार्वजनिक रुपमा केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । प्रधानमन्त्री थोमस थाबानेकी पूर्वपत्नी लिपोलेलोको सन् २०१७ को जुनमा लेसोथोको राजधानी मासेरुमा गो’ली हा’नी ह”त्या भएको थियो ।
थाबानेमाथि ह”त्या गर्न आ’देश दिएको आ’रोप छ । प’क्राउ पुर्जी जारी भएपछि गत जनवरीमा थाबाने देश छा’डेर दक्षिण अफ्रिका भा’गेकी थिइन् । तर, केही समयपछि उनले आफै प्रहरीसमक्ष आ’त्मसम’र्पण गरेकी थिइन् । ह’त्याका’ण्डकै कारण पार्टीबाट द’बाबबीच प्रधानमन्त्री थोमासले गत मे मा पदबाट रा’जीनामा दिनुपरेको थियो । – सीएनएन